Tsy mahita ny valiny tadiavinao?Mandefasa hafatra aminay amin'ny alàlan'ny pejy contact us.
Aiza ny orinasanao? Afaka milaza amiko fampahalalana bebe kokoa momba ny orinasanao ve ianao?
Ny orinasa sy ny orinasa dia hita ao amin'ny No.18 Qiaogao Road, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, Shina.
Goodtone fanaka compamy dia natokana amin'ny famokarana sy ny fanondranana ny birao fanaka nandritra ny 9 taona, ny ankamaroan'ny mpanjifa dia any Eoropa sy Etazonia.
Nahoana no tsy misy vidiny aseho amin'ny tranokalanao?
Ny vidiny dia mety hiova arakaraka ny famatsiana sy ny anton-javatra hafa amin'ny tsena.Ny tranokalan'ny Gootone (www.goodtonechair.com) dia tranokalan'ny mpanamboatra natao hanehoana ny fanolorana vokatray.Raha te hahazo fampahalalana momba ny vidiny ianao dia aza misalasala mifandray aminay mailaka.
Manome serivisy ODM ve ianao?
Eny!Raha mila manamboatra seza amin'ny endrika omenao ianao dia mifandraisa aminay raha te hiresaka bebe kokoa.Afaka manome hevitra sasantsasany hanatsarana ny famolavolana seza ihany koa izahay.
Inona ny fe-potoana fiantohana amin'ny seza?
Manome antoka 5 taona izahay.Ao amin'ny garantie na tsia, kolontsainan'ny orinasanay ny mamaha sy mamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra mba hanomezana fahafaham-po ny tsirairay.
Azonao atao ny mandoa vola amin'ny kaontin'ny banky:
Azo antoka fa afaka manome ny ankamaroan'ny antontan-taratasy izahay ao anatin'izany ny Certificates of Analysis / Conformance;fiantohana;Origin, ary antontan-taratasy fanondranana hafa raha ilaina.
Ohatrinona ny kaomandinao ambany indrindra?
Tsy misy fepetra MOQ, fa amin'ny ankapobeny dia 20 \_" kaontenera, azonao atao ny manafatra modely misy habe amin'ny loko rehetra ho an'ny baikon'ny kaontenera.
Raha liana manokana amin'ny iray amin'ireo vokatray ianao dia mifandraisa aminay ara-potoana, ary hasehonay anao ny santionay sy ny fanamafisana ny vokatra.
Ahoana no ahafahako mahazo ny santionany?
Alefaso amin'ny taratasy fangatahana ny santionany fangatahana.
Express no fomba haingana indrindra nefa lafo indrindra.Ny fitaterana an-dranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny vola be.Ny taham-pitaterana entana dia tsy azonay omena anao raha tsy fantatray ny antsipirian'ny vola, ny lanjany ary ny lalana.Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Hafiriana no hahafahako mahazo ny seza birao aorian'ny fametrahako kaomandy?
Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro.Ho an'ny famokarana faobe, ny fotoana nitarika dia 20-30 andro taorian'ny nandraisany ny fandoavam-bola.
Lasa mandaitra ny fotoana fitarihana rehefa (1) nahazo ny petra-bola nataonao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany momba ny vokatrao izahay.Raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fe-potoanao ny fotoam-pitantananay, azafady mba diniho ny zavatra takinao amin'ny fivarotanao.Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome izay ilainao izahay.Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
TE HANorina Fifandraisana aminay ve ianao?
seza misy tanjona maro Seza mihodinkodina maoderina Seza birao hoditra Seza Mpanatanteraka Luxury Seza birao avo lenta Seza tohana ho an'ny lumbar ho an'ny trano